सुन्दर समाज स्थापना गर्न हातेमालो गरौं | रेडियो झापा 100.7 MHz.
नवराज कार्की, प्रहरी नायव उपरीक्षक, इप्रका दमक
रेडियो झापा 100.7 MHz. बिहिबार, चैत्र २६, २०७७ १४:३९:१३
यहाँ जसले जेसुकै भने पनि जब मानिसलाई सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ, तब उसले भरपर्दो सुरक्षाको लागि प्रहरीको साथ खोज्दछ । आसपास र अगलबगलमा प्रहरी देख्दा पनि उसले सुरक्षाको अनुभूति गर्दछ । समाजको अमनचयन शान्ति सुव्यवस्थामा निर्भर रहन्छ । जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि राज्यद्वारा प्रहरी संयन्त्रको निर्माण गरिएको हुन्छ । उत्तरमा इलाम, पूर्वमा माई खोला, दक्षिणमा भारतीय सीमा क्षेत्र र पश्चिममा मावा खोलाबीचमा शान्ति सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्न नवराज कार्की आउनु भएको छ । कार्की यतिखेर इलाका प्रहरी कार्यालय, दमकका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रको सुरक्षा चुनौति, सुरक्षा व्यवस्था, नागरिकस“ग प्रहरीको सम्बन्धका विषयमा आधारित रहेर प्रनाउ कार्कीस“ग यस साप्ताहिकका सम्पादक गणेश शिवाकोटीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत छ :
प्रहरी सेवामा तपाईंको प्रवेश कहिले भएको हो ?
– २०६१ साल जेष्ठ १५ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेको हु“ ।
आजकल कस्तो छ यहाको दिनचर्या ?
– सामान्य नै छ । अहिले खासगरी सवारी दुर्घटनाका घटनाहरूमा बढोत्तरी भएजस्तो देखिन्छ ।
दमकको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेको कति भयो ?
– अढाई महिनाजस्तो भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंबाट यहा“ सरुवा भएर आएको हु“ ।
प्रहरी सेवाको यो १७ वर्षको दौरानमा सबैभन्दा नराम्रो अर्थात् भनौं कठिनाई कहिले महसुस गर्नुभयो ?
– २०६३ सालको आन्दोलन चाहि“ मेरो व्यक्तिगत जीवनका लागि पीडादायी रह्यो, त्यसबेला म जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङमा कार्यरत थिए“ । ड्यूटीमा खटिने क्रममा मेरो बाया“ हात ड्यामेजजस्तो भयो । एक वर्षसम्म हात चलेन ।
अहिलेसम्म कुन–कुन ठाउ“मा रहेर काम गर्नुभयो ?
– मेरो पहिलो पोष्टिङ अञ्चल प्रहरी कार्यालय, धौलागिरीमा भयो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाग्लुङ, सशस्त्र प्रहरी गुल्म नं. ४ बाग्लुङ, त्यसपछि अपराध अनुसन्धान विभाग काठमाडौं, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्ज, त्यसपछि युएन मिसन अन्तर्गत १५ महिनाका लागि सुडान गए“ । त्यसपछि क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी विराटनगरमा ६ महिना, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाबारीमा १ वर्ष, इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा ५ महिना, त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखामा २ वर्ष र २०६१ साल फागुनमा डिएपी भए“ । त्यसपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा साढे तीन वर्ष कार्यरत रहेपछि भर्खरै इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा सरुवा भएर आएको हु“ ।
यहा“को विभिन्न भूगोलमा बसेर काम गरेको अनुभव छ, दमकको वसोवास कस्तो पाउनु भएको छ ?
– यहा“का वासिन्दाहरु अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ । चेतनास्तर निकै माथि भएको पाएको छु । सबैलाई कानूनका बारेमा जानकारी छ । हरेक कुरालाई चासोको साथ लिइन्छ ।
यहा“ आफैले अपराध अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, सरकारी वकील कार्यालयमा मुद्दा बुझाउनु हुन्छ, पहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएपछि त्यही“बाट तहकीकात, अनुसन्धान हुन्थ्यो । अहिले इलाकाको आफ्नै का“धमा त्यो जिम्मेवारी आएपछि बोझ भएको जस्तो लाग्दैन ?
– प्रहरीले हेर्ने कानुनले अख्तियारी गरेको फौजदारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसुची १ बमोजिमका मुद्दाको हामीले नै गर्ने हो । अनुसन्धान तहकीकातको कुरामा भन्दा पनि सदरमुकाम टाढा पर्ने भएकोले अभियुक्तलाई म्याद थप गर्न लगिरहनु पर्ने भएकोले त्यो चाहि“ कठिनाई भएको छ । लान र ल्याउन चाहि“ अलिक टाढा भयो ।
समाजका गलत तत्वस“ग लड्नका लागि फ्रन्टलाइनमा बसेर तपाईंहरु काम गरिरहनु भएको छ । राजनीतिक प्रेसर कत्तिको आउ“छ ?
– जुन विषय छलफलबाट टु“ग्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्ता विषयमा हुनसक्ला । त्योभन्दा बाहेकका कुरामा कानुन बमोजिम नै हुन्छ । कसैले भनेको भरमा प्रेसरको भरमा काम गरिन्न । मैले अहिलेसम्म त्यस्तो फिल गरेको छैन ।
दमकको भूगोल हरेक कुराको एउटा ट्रन्जिट जस्तो छ । बाहिरबाट अपराध गरेर यहा“ समाजमा हेलमेल हुन कुनै समस्या नरहेको भनिन्छ, तपाईंहरुको अनुसन्धानमा त्यस्तो केसहरू पाउनु भएको छ कि छैन ?
– कतिपय केसहरु त्यस्तो भेटिएको छ । अपराध गरेर यहा“ आएर सेल्टर लिएर बस्ने गरेको नभएको होइन । तिनीहरुको पहिचान गर्न केही समय लाग्ने भए पनि तिनीहरुले उन्मुक्ति भने पाउन सक्दैनन् । हामीले त्यस्तो हुन सक्ने कुरामा निगरानी बढाएका छौं ।
संघीयता पनि प्रदेशमा खटिने प्रहरी संघ या प्रदेश कसको मातहतमा रहने भन्ने कुरा पनि आयो, यसले संगठनलाई कस्तो असर पु¥याउ“छ जस्तो लाग्छ ?
– यो चर्चामा आएकै कुरा हो । पोलिसी निर्माणको कुरा हो । लागू भैनसकेको हु“दा कसरी हेरिन्छ, त्यो संगठनले गर्ने कुरा हो ।
अपराध अनुसन्धानमा कस्तो खालको समस्या खड्किएको पाउनुहुन्छ ?
– कहिलेकाहि“ अभियुक्तको आइडेन्टिटीको समस्या हुन्छ । उसको ठेगाना, घर, आफन्त कोही पनि हु“दैन, बोल्दैन, बेवारिसे हुन्छ त्यो अवस्थामा उसको तीन पुस्ते खुलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेला समस्या हुने गर्र्दछ ।
अहिले यो क्षेत्रमा कस्ता खालका समस्याहरु देख्नु भएको छ ?
– अहिले खासगरी टिपर दुर्घटनाका केसहरु देखिएको छ । टिपरस“ग मोटरसाइकल ठोकिने, अटो–सिटी ठोक्किने दुर्घनाका कुराहरू बढि देखिएको छ ।
टिपर दुर्घटना यस रुपमा बढिरहनुमा के–कसको कमजोरीजस्तो लाग्छ ?
– यो त कहिले मेकानिकल समस्याका कारण पनि हुनसक्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र नलिएकाले चलाएको पनि हुनसक्छ । लाइसेन्स हु“दाहु“दै मापसे गरेर चलाएको छ भने पनि त्यस्तो हुनसक्ने स्थिति छ । अन्य सवारी चालकले ध्यान नदिदा पनि लापरवाहीका कारण, साइडलाइट नबाल्दाका कारण यस्ता घटना भएको देखिन्छ ।
टिपर चालकहरुलाई जति टिप लगाउ“छन्, त्यति कमाई हुन्छ भन्ने गरिन्छ, जसको कारण उछिनपाछिन गरेर धेरै टिप लगाउने ध्याउन्नमा बढी स्पिड हु“दा दुर्घटना हुने गरेको भनिन्छ नि !
– यस्ता कुराहरु पनि सुनिन्छन् । जब दुर्घटना हुन्छ तब यस्ता कुराहरु आउ“छन् । कहिले यसको बनावटको कुरा पनि आउ“छ । यो विषय एउटा अनुसन्धानको विषय पनि बनेको छ । दुर्घटना नियन्त्रणका लागि रिसर्च गर्नुप¥यो, मेकानिकल कारण हो कि ड्राइभरको कारण हो कि, सवारीको बनौटका कारण हो कि यसको निक्र्यौल भएपछि यसको न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
दुर्घटना प्रायः तिव्र गतिका कारण नै हुने गरेको देखिएको छ । यसको निराकरणका लागि सवारीधनी (टिपरधनी) स“ग छलफल, अन्तक्र्रिया हुनसकेको छ ?
– अरु अरु ठाउ“मा त मैले त्यो गरेको छु । अब यहा“ पनि अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । छिट्टै नै हामी उनीहरुस“ग छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।
विगत केही दिनअगाडि दमकमै सिङ्गो घर भाडामा लिएर वेश्यावृत्ति गराउ“दै आएको भनेर केहीलाई रेस्क्यु, केहीलाई मुद्दा चलाइएको पाइयो । त्यस्तो हुञ्जेलसम्म पनि यहा“को संयन्त्रले थाहा नपाएकै हो ?
–थाहा नपाएर भन्दा पनि थाहा पाएर हामीले त्यो अपरेशन गरेका हौं । हाम्रा सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीले नै त्यो कुरा पत्ता लगाएर उनीहरुलाई हामी पक्राउ गर्न सफल भएका हौं । सब्जी मण्डीको ठीक अपोजिट एउटा घर भाडामा लिएर दुई जना महिलाले १७ वर्षदेखिका ३९ वर्ष उमेर समूहका ८ जना बालिका तथा महिलाहरुलाई बेश्यावृत्तिमा रहेको फेला पा¥यौं । रेस्क्यू गर्दा ८ जना थिए । विगत ३ वर्षदेखि नै त्यो घर वेश्यावृत्ति गराउने प्रयोजका लागि भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएका रहेछन् । सादा पोशाकका प्रहरीहरु परिचालन गरी हामीले पत्ता लगाएका हौं । यस्तो सुन्दर, सभ्य नगरीको बीच बजारमा त्यस्तो हर्कत भएको पाउ“दा हामी नै त्रसिद् भयौं । यत्रो तीन वर्ष अगाडिदेखि कसरी छिमेकीहरुले थाहा पाएनन् भन्ने कुरा पनि अर्थपूर्ण रहेको छ । यस विषयमा हाम्रो अनुसन्धान जारी छ । सोधपुछ गर्दा के देखियो भने दिनको वेश्यावृत्ति गराएवापत त्यही घरमा भए एक रातको पा“च सय रुपैया“ र बाहिर भए रातको दुई हजार रुपैया“ उनीहरूलाई सञ्चालिकाले दिने गरेका रहेछन् । सञ्चालिका महिलामध्ये एकजना महिला पथरी शनिश्चरे र अर्की महिला चुलाचुली इलामका रहेका छन् । वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराइएका महिलाहरुलाई दुई महिना यहा“ राख्ने अनि दुई महिना अर्को ठाउ“मा स्थान्तरण गर्ने गरेको पनि बताइएको छ । त्यस विषयमा पनि हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।
वेश्यावृत्तिमा लागेकाहरुको पारिवारिक अवस्था चाहि“ यहा“ले कस्तो पाउनुभयो ?
– उनीहरु पारिवारिक विखण्डन भएका कारण, आमा अर्कोस“ग गएको, बाबुले अर्की बिबाह गरेको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको उनीहरुले बताएका छन् । कोही कोही साथी भाइको लहैलहैमा लागेर, उमेर अलिक बढी भएकाहरु घरायसी अवस्था कमजोर, परिवार पाल्नु पर्ने अवस्थाका कारण आफू स्वेच्छाले यस्तो धन्दामा लागेको उनीहरुले बताएका छन् ।
रेस्क्युपछि अहिले उनीहरुलाई कस्तो अवस्थामा राखिएको छ ?
दुई जना सञ्चालिका माथि मानव वेचविखनको कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ भने, आठ जनालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ ।
यहा“को कार्य क्षेत्र भारतस“ग सीमा जोडिएको छ, यस्तोमा आपराधिक चलखेलका घटनाहरु बढ्ने गरेका छन् कुन रुपमा हेर्नुभएको छ ?
– नेपाल प्रहरीले त्यसको निम्ति सजगता अपनाएको छ । सम्भावित स्थानहरुमा सादा पोशाकका प्रहरीहरु परिचालन गरिएको छ । बोर्डर इलाकाहरु हाम्रो सुरक्षा योजनामा पनि पर्दछ । तत्कालै त्यस्ता क्षेत्रमा ब्लक गरेर कारबाही गर्दछौं । सुरक्षाका लागि प्रहरी सदैव स्ट्याण्डबाई छ ।
यतिखेर बालबालिकाहरु बलात्कार लगायतका अपराधमा बढी संलग्न भएको पाइन्छ, किन होला ?
– एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण पनि हुन्छ । अर्को कुरा अहिले फेसबुक, समाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण, साथीभाइको लहैलहैमा र साथीभाइको देखासिकीमा पनि यस्तो हुने पाइएको छ ।
अहिले पूर्व क्षेत्रतिर विशेष गरी लागूऔषधको कारोबार बढेको छ, दिनहु“जसो पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । यसरी हेर्दा यसको कारोबार झन डरलाग्दो छ जस्तो लाग्दैन ?
– हाम्रो यो दमक क्षेत्रमा लागूऔषधको व्यापार, कारोबारलाई तहसनहस बनाएका छौं । विगतमा वर्षमा लागूऔषधको १५ वटा केस दर्ता हुन्थ्यो भने अहिले म आएको डेढ महिनामै १५ वटा मुद्दा दर्ता गरेका छौं । यो केस कस्तो भने लागुऔषध कारोबार गर्ने डिलरहरुलाई मात्र नापजोख गर्ने डिजिटल मेसिनसहित पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको संख्या हो ।
फेरि पनि कोरोनाको संक्रमण बढेको छ, यहा“को तर्फबाट के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
– निश्चय नै अहिले विश्वमा कोरोना संक्रमणको महामारी पुनः बढेको छ । सबैले सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । मैले कोभिड ‘नो–भिड’ भन्ने मूलमन्त्रलाई सबैले पालना गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । सामाजिक दूरी कायम राखौं, माक्सको प्रयोग गरौं । भिडभाडमा नजाऔं भन्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा यहा“का नागरिकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
– प्रहरी भनेको जनताको सेवक हो । समस्या नपरी कोही पनि प्रहरीमा आउ“दैन । आफूलाई परेको समस्या नहिच्किचाई सिधै मकहा“ लिएर आउनु होला । विचौलियाको विश्वासमा नपर्नुस्, उसले मिलाई दिन्छु, यति पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छन् । विचौलिया दलालको भरमा नपर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै कुनै पनि घटना, अपराधको सूचना हामीलाई दिएर एक सुन्दर समाज स्थापना गर्ने हाम्रो प्रयत्नमा हातेमालो गरेर अघि बढौं भन्न चाहन्छु ।